UK ayaa qorsheyneysa in ay dhinto shaqaalaha dowladda u shaqeeya: – Voice of Somalis In Exile
(WAR)-13/05/2022-UK- Dowladda isutagga boqortooyooyinka midoobay 9UK) ayaa la timid qorshe ku aadan, in ay dhinto shaqaalaha dowladda u shaqeeya.
Talaabadaan ayaa ka dambeysay, markii raisulwasaare Boris Johnson aad farta loogu fiiqay, in aanu xil badan iska saarin, wax ka qabashada maciishada iyo qiimaha nolosha dalka UK oo aad sare ugu kacday.
Dolwada ayaa carrabka ku dhufatay in eey shaqada ka fariisineyso, sagaashan kun oo shaqaale iyada u shaqeeya (Civil Services) si mushaaharadii ay siineysay, ugu weeciso dhinacyo kale.
Tan ugu daran ayaa ah dadka reer UK oo aad ugu qaaliyoobeen, Gaaska, Korontada iyo Biyaha (Energy Bills) halka sicirna cunnadu uu kordhay boqolkiiba sadex (3%).
Waxaa in yari ku korodhay musharada iyo qiimaha loo sargooyey in qofku ku loonaal karo, laakiin taas ayaan sameyneynin isbadel muuqda, sababtuna waxeey tahay, in iyana ay kordheen, canshuuraha daqliga qofka sooo gala ( income Tax) laga jaro, iyo lacagta caymiska qaran (National Insurance contribution), waxaa iyadana cirka isku shareeyay canshuuraha dowladaha hoose (Council Tax).
Xisbiyada muraacadka ayaa sii saadaalinaya, in dalku ku dhici doono mar kale dhaqaale-xumme ba’an, sidii dhacday kal hhore markii isla xibigaan hadda talada haya ee Conservative-ku, oo UK ka talinayey, John Major-na uu raisulwasaaraha ahaa.